Hadal hayn ka dhalatay war lagu faafiyay warbaahinta Qaranka | KEYDMEDIA ONLINE
Hadal hayn ka dhalatay war lagu faafiyay warbaahinta Qaranka
Warbaahinta Dowladda ayaa u muuqatay mid gooni loo leeyahay tan iyo markii uu xilka Madaxweynaha qabtay Farmaajo, afar sano ka hor, dadka ka falceliyay ayaana howlwadeennada iyo masuuliyiinta Warbaahinta qaranka ku eedeeyay falka ay ku kaceen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hadal heyn xooggan ayaa ka dhalatay war dhawaan lagu faafiyay Warbiihinta Qaranka, kadib markii ay si cad isaga indhatireen sheegidda magaca Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan, (Joon).
Guud ahaa mareegyada warbaahineed ee Dowladda ayaa lagu faafiyay sawirada iyo qoraal isku mid ah, Sawairada waxaa ka wada muuqda, Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin, (Fiqi), Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan, (Joon) iyo Taliyaha Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka General Maxamed Tahliil Biixi.
Sawirka hadal heynta dhaliyay oo ah midka kulminaya Saddexda masuul, ayaa ah mid bixinaya tilmaan gooni ah oo heshiis, midnimo iyo ka go’anaasho ka turjumaya, hayeeshee, warbaahinta afka Dowladda ku hadasha ayaa iska indhatirtay magaca General, taas oo sababtay hadal heyn xooggan.
Marka laga yimaado dadweynaha sida aan la rumeysan karin magaca Joon ugu qoray goobaha faallada laga dhiibto (Comments) waxaa jira mauuliyiin xilal haya, oo layaab ku tilmaamay habdhaqanka aan wali waxba iska badalin ee Warbaahinta Qaranka.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa, ayaa yiri, “Marka dagaalka danta qaranka loogu jiro iyo xanaaqa aad shaqsi u qabto isaga kaa darsamo waa saan oo kale. Qolada Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed waxa ay wali xasuustaan aamusintii Wasiirkooda”.
Wasiirka Amniga Galmudug, Xildhibaan Fiqi, ayaa isna yiri, “La dirirka argagixisada ayaa mideeyey markii ay dhacday in siyaasaddu kala geysay, haddii meel la isku diido macnaheedu ma ahan inaan meelo kale la isku waafiqi karin. Gen. Maxamed Biixi iyo Gen. Saadaq John oo ku ballamay ciribtirka argagixisada”.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, ayaa dhankiisa qoray, Ragii shalay Farmaajo aaggaga dagaal isaga horkeenay ee Jidka Makka Almukarama dhufaysyada isugu jiray maanta hal dhufays iyo hal aag dagaal oo Alshabaab ka dhan ah ayay ku jiraan. Waa ku mahadsanyahay Madaxweyne Ahmed Abdi Kaarie (Qoorqoor) in uu ragaas ka dhigay hal u jeedo iyo hal aag dagaal. Xabaddooduna maanta ku sii jeedo cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Alshabaab!